Volontiya - Imbokodo
Bangaphi Abantu Abaza Kuba Kolu Phononongo, Kwaye Ngubani Onokujoyina?
Uphononongo luza kubhalisa amavolontiya angamabhinqa amalunga nama-2600 eMzantsi Afrika, eMalawi, eMozambique, eZambia, naseZimbabwe. Ukuze ajoyine olu phononongo, amabhinqa kufuneka abesempilweni, abephakathi kweminyaka eli-18 nama-35 ubudala. La mabhinqa kufuneka avume ukwenziwa uhlolo lwezonyango kwaye afumane iingcebiso novavanyo lwe-HIV rhoqo. Akanakukhulelwa okanye ancancise. Ikhona neminye imimiselo ekufuneka ayifezekise ukuze akulungele ukujoyina olu phononongo.
Onokukulindela Ukuba Ugqiba Kwelokuba Uvolontiye
Siza kuphendula nayiphi na imibuzo onayo ukuze siqinisekise ukuba uyakuqonda okubandakanyekayo ekuthatheni inxaxheba kolu phononongo.
Uza kwenza uxilongo lomzimba oluquka uvavanyo lwegazi. Iisampuli zegazi ziza kusetyenziselwa: ukuvavanyela ulosuleleko lwe-HIV; ukuhlola indlela umxokelelwano wakho wamajoni omzimba osabela ngayo kwizitofu zophononongo; uvavanyo olungephi lwemfuza oluya kunceda abaphandi baqonde ngcono ngempilo nomxokelelwano wamajoni omzimba wabathathi-nxaxheba.
Ebudeni bophononongo, uza kuya ekliniki phantse izihlandlo ezili-17 kwixesha leminyaka emi-3. Kwizihlandlo ezi-4 zotyelelo uya kufumana iinaliti zezitofu zophononongo okanye oosinga-yeza. Ziphelele, uya kufumana iinaliti ezisithandathu ngeli xesha lophononongo.
Uza kucelwa ukuba uqwalasele indlela oziva ngayo iintsuku ezi-3 ukuya kwezisi-7 emva kwenaliti nganye. Emva kweli xesha, wena kunye nomsebenzi wesayithi niza kuqhagamshelana ukuze kubonwe indlela oziva ngayo.
Utyelelo lokulandelela luza kuquka iingcebiso novavanyo lwe-HIV, nokuphendula imibuzo evela kubasebenzi basekliniki. Olu tyelelo luza kuba lufutshane kunotyelelo apho uza kufumana iinaliti.
Iingcebiso nge-HIV ziza kucebisa malunga neyona ndlela ingcono yokuzikhusela kulosuleleko lwe-HIV ngeli xesha lophononongo.
Luza Kwenziwa Nini Phi Na Olu Phononongo?
Uphononongo luza kuqalisa ngokubhalisa abathathi-nxaxheba ngoNovemba 2017 kwaye luza kuqhubeka kwiisayithi ezininzi eMzantsi Afrika, eMalawi, eMozambique, eZambia, naseZimbabwe.